トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ A mashandiro ose wokurarama mbiri
The wokurarama chikwereti, mukuru zita rinonzi wokurarama, ishoko rinoreva kubhadhara nguva nenguva. Kazhinji, rinenge zvaireva kubhadhara mari akatsunga mwedzi, kunyange kana kutenga zvinhu zvinodhura, ndiwo maitiro kuti yaifanira kupera muna chete kuenda kubhadhara ose mwedzi imwe mari.
chinokosha mutengo panzvimbo mari kamwe kamwe, nenzira kubhadhara kanoverengeka kuburikidza kudzivisa mari inobhadharwa mwedzi mumwe mari, kana iwe kutenga chigadzirwa Somuenzaniso, 100,000 Yen, pamwedzi yakatarwa uwandu mu R wokurarama chikwereti kune 10,000 Yen, wechikoro asi Zvakamubatsira muna 10 nguva, mukuru wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse wokurarama zvikwereti pamwe kubhadharwa nguva kufarira panguva wepagore chimbadzo 10% of mubereko achava 11 months, yaipedzerwa muripo achava 107.497 Yen . Muna wokurarama chikwereti havachazofaniri kubhadhara 100,000 Yen panguva, asi nzira muripo kuti kufarira kunodiwa.
muripo nzira iyi, hapana kuwedzera nzira iri uyewo wechikoro uye mubereko sandara-zvazvingava wokurarama zvikwereti, kufarira munguva muripo achasiyana. Payment zano iri zvakafanorongwa nokuda kadhi kambani, unofanira kurangarira kana iripo. Kazhinji, zviri pasi chikuru sandara-mwero wokurarama chikwereti ari kutenga, panyaya caching kuna wokurarama chikwereti kune kuva huru uye mubereko sandara-mwero wokurarama chikwereti.
wechikoro twasu-mutsetse ribonucleic nzira iri nzira kubhadhara mari yakawanikwa nokuwedzera kufarira kune wechikoro. Somuenzaniso, gore negore chimbadzo vakabatwa kuti 15%, kana iwe kutenga yakatarwa kuti 100,000 Yen nhumbi kuti rendi kusvika 10,000 Yen, 10,000, waiva rokutanga romwedzi akawedzera 1250 Yen pakati 10,000 Yen uye kufarira wechikoro iwe kubhadhara 1250 Yen. Zvadaro, mubereko acharamba kutapudzwa 1125 Yen, uye 999 Yen zvishoma nezvishoma. Yokupedzisira 10 months kupedza mari iri debited ari Yen 10124. Huwandu nenhumbi yakatengwa, yakakamurwa ne kushaya mari yakatogadzirwa, zviri dzinoratidzwa nhamba vachibhadhara uye zvakaenzana.
Ndeipi imwe mumiririri ari mukuru uye mubereko sandara-zvazvingava wokurarama zvikwereti, pano munhu nzira kubhadhara imwe mari, kusanganisira mubereko. In chikuru sandara-mwero wokurarama chikwereti kuzvitenga pamwedzi mari ndinoiitawo mubereko kuti wechikoro, asi ichi kubhadhara wakaiswa mari, kusanganisira mubereko . Somuenzaniso, kana ukatenga 100,000 Yen nhumbi, rokutanga romwedzi kusanganisira 1250 Yen, 8750 Yen uye kufarira mukuru 10,000 Yen.
Nokuda kwechikonzero ichi, nhamba vachibhadhara, uwandu nenhumbi, zvichava kupfuura kangani yakakamurwa nokuda debit mari yakanga pakutanga kuisa. Kana iwe waakatenga akatarirwa kuti 100,000 Yen nhumbi 10,000 Yen kubhadhara pamwedzi, nhamba vachibhadhara vachava 11 nguva. Chokutanga ndechokuti kubva mwedzi kusvikira 10 mwedzi pashure debit chitsama romwedzi, asi ndiyo 10,000 Yen, 11 kana pane mwedzi, vasara wechikoro 7405 Yen, 7497 Yen, zvakanzi akawedzera 92 Yen anofarira deducted pano iwe.
Uyezve, pane muripo nzira, akadai wakaiswa-mwero wokurarama chikwereti zano uye pakuenzanisa yemasiraidhi hurongwa, asi, kazhinji, achava mukuru wechikoro twasu-mutsetse ribonucleic hurongwa kana mukuru wechikoro uye mubereko sandara-mwero wokurarama chikwereti. Kufarira uye kufarira zviri kusiyana Chaizvoizvo, vari kutenga mhindu, mari nokukwereta ave mubereko. Kashoma kuti kusiyanisa zvakasimba muna kadhi kambani, kufarira hakuiti nyaya vaiona mubereko vakaenzana.
kufarira repamutemo kunotenga havasi kukanganiswa pasi Capital Subscription Mutemo uye Kufarira Rate Kungorambidza Mutemo mari achiposa kushandisa vakadaro Money Lending Business Law. MuJapan Credit Association, kubudikidza kuzvidzora, zvinonzi yakaiswa maererano kufarirwa kunotenga kusvikira zvatinopiwa of Investment Mutemo mukati 20%. Ri iwe. Kufarira uye kufarira zviri kusiyana Chaizvoizvo, vari kutenga mhindu, mari nokukwereta ave mubereko. Kashoma kuti kusiyanisa zvakasimba muna kadhi kambani, kufarira hakuiti nyaya vaiona mubereko vakaenzana.
kufarira repamutemo kunotenga havasi kukanganiswa pasi Capital Subscription Mutemo uye Kufarira Rate Kungorambidza Mutemo mari achiposa kushandisa vakadaro Money Lending Business Law. MuJapan Credit Association, kubudikidza kuzvidzora, zvinonzi yakaiswa maererano kufarirwa kunotenga kusvikira zvatinopiwa of Investment Mutemo mukati 20%.